Ny tiany dia manakiana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny Instagram. Mampiseho ny firotsahana sy ny fikasana avy amin'ireo mpampiasa izany, midika izany fa mizotra amin'ny lalana marina ianao. Izany dia nilaza fa mety ho sarotra ny mitaona ny olona ho tia ny hafatrao, indrindra raha marika vao manomboka ianao. Nasongadinay ny fomba sasantsasany izay afaka manampy anao hahazo ny isan'ireo tianao indrindra amin'ny marikao.
Raha ny tena manintona an'i Instagram dia ny seha-pifanehoana sary mahasarika, ny ampahan-tsoratra dia tonga segondra farany rehefa miresaka marika mampiseho ny fahaizan'izy ireo. Ny caption tsara dia hita hampitombo ny fanentanana ny marika sy ny fanampiana ny fahatsiarovana ny marika. Ary koa, ny fanazavana dia lafiny iray amin'ny lahatsoranao izay azonao iverenana indray hahazoana sitraka bebe kokoa raha tsy ampy ny sary. ny fanazavana mahaliana afaka mahazo fanehoankevitra ihany koa ny mpanaraka, izay mety hanatsara ny fifamofoana.
Ny CTA dia ampiasaina hamitahana ny olona hanatanteraka hetsika hentitra ao amin'ny kaontinao Instagram. Ny CTA dia mifototra amin'ny zava-misy, ary mila mahatakatra ny toerana sy ny fomba fampiasana azy ianao. Hanaiky ny CTA fotsiny ny olona raha misy zavatra sarobidy omenao azy ireo. Paikady tsara ny famoronana fahatsapana fahamehana rehefa mampiasa CTA. Andian-teny toa kitiho izao raha te hahalala bebe kokoa, tsy misy raha tsy amin'ny fotoana voafetra dia ohatra tsara mba hisintomana ny olona.
Lafiny iray lehibe amin'ny fisarihana fifamatorana bebe kokoa amin'ny kaontinao ny maka antoka fa mifanaraka amin'ny fotoana anaovan'ny mpanaraka anao ny fotoana anaovanao doka. Tsy misy olona "fotoana mety handefasana" ao amin'ny Instagram - miovaova arakaraka ny karazana orinasa sy ny toerana kendrena izany. Izany dia nilaza fa ny fitsipika ankapobe hisarihana ny mpanjifa dia ny mandefa mandritra ora fiasana mandritra ny andro toy ny sakafo atoandro (11: 00 am to 1: 00 tolakandro) na aorian'ny asa (7: 00 PM 9: 00 am). Izany dia nilaza fa mila mijery ny toerana kendrenao koa ianao. Misy ihany koa ny lahatsoratra antsipiriany bebe kokoa momba ny fotoana handefasana amin'ny Instagram avy Hubspot fa azonao atao ny manamarika.
Instagram dia manampy amin'ny famoahana sehatra rehetra, izay mahatonga azy io ho sehatra lehibe hampiroborobo ny orinasanao amin'ny. Azonao atao ny mampiasa ny sakafonao Instagram ho loharanom-baovao amin'ny sehatra hafa toa ny Facebook sy Twitter. Mety hiasa aminao indrindra izany rehefa manao fifaninanana ianao. Tian'ireo olona ny fifaninanana mandresy, ka noho izany ny fahazoana ny teny amin'ny sehatra media sosialy hafa dia afaka manampy anao hihanaka bebe kokoa amin'ny marikao. Ary koa, marika marobe marobe no mampiasa ny URL ao amin'ny bio-nao mba hampifandraisina amin'ny pejin-dry zareo Facebook izay ahafahanao mitarika azy ireo mankany amin'ny URL hafa.